विज्ञापन डिजिटल काट्ने प्लटर कारखाना | चीन विज्ञापन डिजिटल कटिंग प्लटर निर्माता, आपूर्तिकर्ता
विशेषताहरु; 1 सानो ब्याच दफ्ती बक्स उत्पादन र प्रमाणिकर, नालीदार गत्ता, गत्ता, पीवीसी बोर्ड को एक किसिम काटन लागि उपयुक्त, पूर्ण तपाईंको आवश्यकता पूरा। 2. युरोपेली 64-अक्ष एकीकृत नियन्त्रण प्रणाली परिचय दिनुहोस्। दफ्ती बाकस को 3. सानो ब्याच, कुनै पनि समयमा परिवर्तन मर्न कुनै आवश्यकता।4उद्योग पहिलो वाईफाई प्रसारण समारोह, वायरलेस प्रसारण हासिल गर्न। शुद्धता काटन सुनिश्चित गर्न5आयातित इमहजुरआमा मोटर र इमहजुरआमा नियन्त्रक।6achi गर्न प्रतिस्थापन उपकरण टाउको को एक नम्बर, ...
गरौं हामीलाई थाहा